UBUNGAKANANI BEPERGOLA (ISIKHOKELO SOYILO) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Ubungakanani bePergola (Isikhokelo soYilo)
Ubungakanani bePergola (Isikhokelo soYilo)
Nantsi isikhokelo sethu semilinganiselo ye-pergola ngendlela yokulinganisa, ubungakanani obuqhelekileyo bezithuba, imiqadi kunye nophahla.
Kukho izinto ezimbalwa eziphambili ekufuneka zicwangcisiwe xa ulungiselela ukwakha iperola. Ngokusisiseko kufana nokwakha igumbi ngaphandle ngaphandle kweendonga. Oku kuthetha ukuba kufuneka ufumane ubude obunqwenelekayo, ubude nobubanzi. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ungakanani na umva wendawo ongasemva kwayo ekufuneka uqiniseke ukuba awuyixinanisi indawo.
Ulinganisa njani uyilo lwePergola
Ubungakanani obuqhelekileyo bePergola
Zeziphi iiPiggolas ezingena?
Bobuphi ubukhulu obufanele ukuba yiPergola Rafters?
Ubungakanani bePosti yePergola
Ukuphakama kwesilingi sePergola
Izinto zoYilo lwePergola
Ukulinganisa i-pergola kufuneka uyazi ukuba yeyiphi indawo ekhoyo ekufuneka ubeke i-pergola. Ukuqinisekisa ukuba ayisondeli kakhulu okanye ikude kakhulu kwezinye izakhiwo eyadini, kwaye apho iindlela ziya khona nokubuya kwipergola.
Ngezinto ezikhethiweyo kunokubakho uthintelo lobungakanani, kodwa ngokusekwe kwindawo ekhoyo, kunye nobukhulu obufunwayo, dibanisa ubukhulu obukufutshane obufumanekayo kwizixhobo ezifunekayo. Ukuba akukho nanye into ekude ngokusondeleyo, kukho iindlela zesiko ezikhoyo.
Ngoncedo ngakumbi ukwenza uyilo lwakho jonga enye ye Isoftware yoyilo lwe pergola iinkqubo zokunceda ukubona imibono yakho.
Ubungakanani obuqhelekileyo be-pergola, nto leyo eya kuthi uyifumane nakweyiphi na iikiti ezingaphambi kwexesha ezinobungakanani obahlukeneyo. Kukho iindlela ezimbalwa zokubeka ezi zinto ngokudibeneyo kwaye ngokusekwe kwindlela ofuna ukuba i-pergola ijongeke ngayo ekuhambeni kwexesha. Ubungakanani obuqhelekileyo bumalunga neenyawo ezili-13 ngeenyawo ezili-19 xa zizonke. Obu bungakanani bujolise kubungakanani beendonga ezihamba ngaphezulu kwepergola.
Izithuba ziyacetyiswa ukuba zibe malunga no-1 inyawo kunye nee-intshi ezi-6 ukusuka esiphelweni semigangatho. Oku kwenza ukuba iposti ithumele ubungakanani malunga neenyawo ezili-10 ngeenyawo ezili-16, malunga nobungakanani oza kuthi ubusebenzise. Nantoni na enkulu kunale yobungakanani obuqhelekileyo inokubangela ukuba kufuneke izithuba ezingaphezulu komgangatho wesi-4.
Ngelixa obu bubungakanani obuqhelekileyo, umenzi ngamnye uya kuba neekiti ezahlukeneyo ngobukhulu obahlukeneyo, ke jonga ngezantsi ezinye ubungakanani obuqhelekileyo ukuba lo mgangatho awusebenzi kwindawo yakho.
Iipergolas ziza kuzo zonke iintlobo zeemilo kunye nobukhulu. Ngokuqhelekileyo iipergolas zingabaleka naphi na ukusuka kwii-8 iinyawo nge-8 iinyawo, ukuya kwii-20 iinyawo ngeenyawo ezingama-20. Oko kunika uluhlu olukhulu lwezinto onokukhetha kuzo, ngakumbi kuba azidingi nokuba zizikwere ukuba ayingobuhle obunqwenelekayo.
iitemplate zesimemo sokuhlanjwa kwabatshatileyo simahla
Ukongeza, ngenxa yokuba obu bubungakanani obuqhelekileyo be-pergola ayithethi ukuba awukwazi ukwenza into eyahlukileyo. Kukho ukhetho olungenamda kwiziko ezithile. Fumana eyona ilungele wena.
I-pergola yanamhlanje ngesingqengqelo secandelo elingaphandle kunye netafile yekofu.
Ubungakanani bomqolo we-pergolas yinto eya kuthi inike isixa somthunzi ofunwayo, kwaye ibuye ilinganise i-pergola, isenza iiposti kufuneka zikwazi ukubamba ubunzima besayizi yomqadi oyifunayo. Oko kuthethiweyo, ubungakanani bunokwahluka kubude, ubukhulu kunye nobungakanani. Nokuba izinto zinokutshintsha ubungakanani bemigangatho.
Ngokwesiqhelo imiqadi inokuba zi-intshi ezi-2 x 6 intshi, 2 intshi x 8 intshi, okanye 1.5 intshi ngo 7.25 intshi. Ubude bemiqadi buya kude kube unqwenela ukuba i-pergola ibe yiyo. Ixesha elide imiqadi, kokukhona ufuna.
I-Pergola ene-canopy .
Ubungakanani bezithuba zibaluleke kakhulu, kuba zezona zibambe ulwakhiwo lonke. Ubungakanani buyahluka ngokusekwe kwizinto ezimbalwa. Izinto zezi: ukuphakama kwesilingi, ubunzima be-pergola iyonke, ukubekwa kwezithuba, kunye nenani lezithuba eziza kusetyenziswa.
I-pergola esemgangathweni ihlala isebenzisa ii-6 x 6 intshi yezithuba zenkxaso. I-pergola encinci inokusebenzisa i-4 x 4 intshi yezithuba ezide xa inezithuba ezingaphantsi kwe-4 ukuya kwi-6 iinyawo phakathi kwezithuba. Njengomgaqo oqhelekileyo wesithupha ubunzulu bomngxunya owusebenzisayo kwizithuba zakho kufuneka ubengu-1/4 wokuphakama kweposti yakho. Ububanzi bemingxunya akufuneki bube ngaphantsi kwe-intshi ezili-10 ububanzi, kunye nezithuba ezikhulu ezi-6 6 ezifuna i-12 ″.
Ezinye i-pergolas ziqhotyoshelwe kulwakhiwo esele lukhona, oko kuthetha ukuba kuya kubakho izithuba ezingaphantsi, kwaye ubunzima obuninzi buthatyathwa ngenxa yokuncamathiselwa kwekhaya okanye ukwakha. Izithuba zisafuna ukuthwala ubunzima.
Ubude obuqhelekileyo (Njengoko kuchaziwe ngezantsi) buya kuba malunga neenyawo ezili-9 okanye i-11 iinyawo ngokuxhomekeke kubude obufunekayo besilingi (Olunye uhlobo olongezelelekileyo ukunceda ukuxhasa phezulu kunye nokugrunjwa emhlabeni). Ubungakanani bezithuba buya kuxhomekeka kwizixhobo ozisebenzisayo, njengoko ezinye kufuneka zingqindilili kunezinye ukubamba ubunzima. Kananjalo zinokuba nkulu ukuba uyilo oluthile okanye imikrolo iza kuchazwa kwizithuba. Ezi zinokuthwala ubunzima kwaye zihlale zintle!
Ukuphakama kwe-pergolas eqhelekileyo kumalunga ne-8 yeenyawo ukuya kwi-10 yeenyawo ubude. Obu bubude obuphakamileyo obuqhelekileyo nakweyiphi na indawo evaliweyo enjengamagumbi, iigaraji, njl. Ngelixa isilingi ngokwayo iya kuba zii-8 okanye i-10 iinyawo kuhlala kubalulekile ukukhumbula ukuba ubume obuphezulu buthatha indawo. Ngokwesiqhelo kuba ii-pergolas zingaphandle kwezakhiwo, oku akubangeli naziphi na iingxaki, kodwa ukuba uqhotyoshelwe kolunye ulwakhiwo kubalulekile ukuba unike ingqwalaselo ukuba imiqadi ephezulu kunye nemiqadi iyahambelana nesakhiwo osincamathisela kuso.
Isinyithi sanamhlanje I-pergola enomgodi womlilo .
Enye into ebalulekileyo ekufuneka uyicwangcisile zizinto ezinokusetyenziswa kunye nento ongathanda ukuyisebenzisa. Ezinye izinto zilunge ngakumbi kwiindawo ezithile ezinobulumko bemozulu okanye ubulumko bendawo. Jonga kwiingcebiso kunye neemfuno zommandla wakho. Nje ukuba wazi ukhetho lwakho ngokusekwe kwinto ovunyelweyo ukuyisebenzisa, emva koko unokukhetha eyona uyithandayo.
Ezinye izinto ezithandwayo ze-pergola onokuzisebenzisa zezi zilandelayo:
IAluminiyam -I-Aluminium yomelele kakhulu, abanye bathi phantse ayinakutshatyalaliswa, kunye nolondolozo oluncinci.
cPVC -Cpvc yinto eguqukayo ekomeleleyo neyomeleleyo. Le nto ihlala isetyenziswa kwiimeko zentengiso.
Ifayibha yeglasi -I-fiberglass yindawo yokugcina esezantsi kwaye ihlala ixesha elide. I-fiberglass ayifuni izithuba ezininzi zokuxhasa njengoko ikhula.
IVinyl -I-Vinyl ayibizi kakhulu ngelixa igcina umgangatho ophezulu kunye nembonakalo.
Umthi -Umthi wepayini nje ophathwe ngokufanelekileyo unokusetyenziswa kwiimeko ezininzi, oku kunika ukubonakala kwendalo kwaye kuhlala kuqinile. Umthi uyehla ngokuhamba kwexesha.
Ndwendwela eli phepha legalari ukubona okungakumbi izimvo ze-pergola .
kwidayari yangaphandle yelanga u-Sail Canopy, 10 'x… $ 39.99 umthengisi ogqibelele (1625) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Isikhokelo seGear Gazebo encinci, 5 'x 8' $ 144.99 umthengisi ogqibelele (82) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
UDura-Trel 11179 Wellington Arbor, Mhlophe $ 279.78 umthengisi ogqibelele (602) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IGiantex 88inch Wood Garden Arbor, thina… $ 229,99 umthengisi ogqibelele (124) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Isipho seminyaka eli-10 somtshato kuye
Ixabisa malini umququzeleli womtshato
unxibe ntoni phantsi kwelokhwe yomtshato
Ingoma yootata neentombi